Ogaden News Agency (ONA) – Hambalyo shirkii maamulka jaaliyadda Eastern London ee dalka South Africa (ileys) looga soo gudbiyay jaaliyadda Sweden.
Hambalyo shirkii maamulka jaaliyadda Eastern London ee dalka South Africa (ileys) looga soo gudbiyay jaaliyadda Sweden.
Posted by ONA Admin	/ January 20, 2012
Shir lagaga hadlayey howla halganka iyo sida sanadkan cusub howlaha horyaala ay u fulin lahayen farca ileys oo ka mid ah faracyada hoos yimaada jaaliyada balaadhan ee JOKA ayaa shirkan ku go’aansatay qorsho sanadeedka u yaala.
Gudomiyaha faraca ileys ee Easter London Maxamud sheikh oo ka jeediyey warbixin badan oo ka xaaladaha halganka uu ku sugan yahay gudaha Ogadenia iyo dibadaba.
Waxay kaloo faraca ileys ansixiyen shirwayne ay u qabanayaan shacabka Somaliyed ee ku nool magalada Easter London iyo nawaxigeda. Shirkaas ayaa ka dhici doona magaaladan 29/1/2012 shirkaasoo ay ka soo qayba gali doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaliyeed sida culamada diinta, cuqaasha, aqoonyanada, siyasiyinta iyo ardayda wax ka barata jamacadaha Eastern London iyo bulshada inteeda kale.
Shirka ay xubnaha isugu yimaadeen oo qaatay muda dheer falanqayn badana laga soo jeediyey iyo siduu xubin walba u hormarin lahaa kaalinta kaga aadan halganka ka socda Ogadenya, taasoo ka dhalatay in la’isku waafaqay inuu xubin waliba howlaha halganka kaga aadan sii laba jibaaro.
Daba yaaqadii shirka ayuu gudoomiyaha faraca wuxuu u soo gudbiyay hanbalayo shaqa wanaag ah jaaliyada dalka Sweden oo ku guulaystay banaabxa cadawga wadanaha gooyey todobaadkan.
Shirka maamulaka faraca Eastern London ayaa ku soo gaba gaboobey guul iyo isafgarad
ONA/ST LONDON KOONFUR AFRICA